Dowladda Soomaaliya oo dalbatay in la maaglashado magaalada Baraawe – Bandhiga
Dowladda Soomaaliya oo dalbatay in la maaglashado magaalada Baraawe
Dowladda Federalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay sawirro laga soo qaaday magaalada Baraawe oo dhacda gobalka Shabeelaha Hoose kuwaa oo muujinaya taariikhda fog ee magaalada iyo sida ay ugu wacan tahay in lagu dalxiiso.
Dowladda Soomaaliya sheegtay in magaalada ay u baahantahay maalgelin si loo hormariyo, waxaana ay intaa ku dartay in soo jiidasho gaar ah u leedahay indhaha marka loo eego magaalooyinka kale ee dalka,waxaana ay Muqdisho u jirtaa 180 KM.
Baraawe waa magaalo Xeebeed taariikhi ah, waxa ay noqotay xarun Islaami ah tan ugu wayn ee geeska Afrika. Baraawe waxa ay ka mid tahay magaalooyinka Soomaaliya ugu taariikhda weyn illaa iyo waxaa la sheegaa magaalada in ay dhisan tahay muddo ku dhaw 1150 sannadood.
Baraawe waxaa degan in ka badan 27,000 (labaatan iyo toddobo kun) qofood, intooda badan dadka sida la sheego waa dad deegaanka u dhashay ee Barwaani loogu yeero oo waxay ku hadlaan af gooni ah. Afka Barwaanida waxaa uu u dhow yahay afka sawaaxiliga.
Dadka asal reer Baraawe ah waxa ay kala sheegtaan sawaaxili iyo burtoqiis. Sannado badan kadib is dhexgalkooda iyaga iyo bulshada Soomaaliyeed aad buu u yaryahay dadkan.
Dhanka dhaqaalaha waxa ay tahay magaalada ugu dhaqaalaha badan gobolka Shabeelada Hoose.
Magaalada Baraawe marka aad eegto dhismo ahaan waa magaalo qadiimi ah. Waana magaalo Istaraatiijiyad dhaqaale leh taas oo ku taal xeebta badwaynta Hindiya. Waxa ay magaaladu leedahay deked u furan xudunta goballo badan oo aan bad lahayn haddana khayraad iyo wax soo saar leh sida gobollada Jubbadda dhexe, Baay, Bakool iyo Gedo.
The coastal town of Barawe,180 km south-west of Mogadishu, is an archaeological treasure and a tourist resort due to its attractive features and cultural nature, but lacks investment and promotion for its development.#Somalia #Somali #Barawe #LowerShabelle #Mogadishu #Tourism pic.twitter.com/8b9mFwSaOI
— Federal Republic of Somalia🇸🇴 (@Somalia) September 30, 2018